Ndi otutu mmadu ndi gbara gi gburugburu n'ebughi nkpuru obi (ndi adighi anu aru)? : Martin Vrijland
gbara akwụkwọ IHE SIM	by Martin Vrijland	na 8 July 2019	• 17 Comments
isi iyi: svtstatic.se
Ọ fọrọ nke nta ka o sie ike iche, ma ọ dị mgbe ị na-eche ma ụfọdụ ndị gbara gị gburugburu nwere 'mkpụrụ obi' n'ezie? Naanị ị ga-elegharị anya na ndụ gị kwa ụbọchị na mgbe ụfọdụ, ị ga-ahụ ndị nwere ike ịme ihe na mmetụta ọmịiko, ma ndị nwere ike ịgagharị n'emeghị obi ọjọọ karịa ndị ọzọ ma ọ bụ jiri ego ọnụ na-azụ ahịa na ihu ọ bụla emebi 'ndi mmadu'.
George Ivanovich Gurdjieff bụ onye na-arụ ụka Grik-Armenia onye ọkà ihe ọmụma, onye siri ike, onye edemede, onye na-ede akwụkwọ, onye na-ede ihe nkiri na onye na-azụ ahịa. Ọ bụrụ na i nwere ngwa ngwa megide nke a n'ihi na ị nwere ike ịbụ onye Grik ma ọ bụ onye Armenian, mee ka ọdịiche ọdịdị ọdịdị ahụ malite ma gụọ. nkwupụta a site na nwoke:Otu pasent dị ukwuu nke ndị anyị na-ezute n'okporo ámá bụ ndị na-efu n'ime, ya bụ, ha anwụọrị n'ezie. Ọ baara anyị uru na anyị anaghị ahụ ya ma amaghị ya. Ọ bụrụ na anyị maara na mmadụ ole na ole anwụọla na ole n'ime ndị a nwụrụ anwụ na-achịkwa ndụ anyị, anyị ga-agba akwụ na egwu."
Ọ nwere ike ịbụ na anyị ga-ewere nke a n'ụzọ nkịtị karịa ka anyị chere? Anyị nwere ike amaworị fim na usoro nke anyị na-ahụ ngwa ngwa ndị yiri ka ọ dị elu n'oge na-adịghị anya na ị gaghị ahụ ihe dị iche. Ndị na-eme ihe ike bụ ndị na-enwe ike ịghọta na imeghachi omume mmetụta uche ụmụ mmadụ. Usoro Netflix 'Real Humans' bụ ezigbo ihe atụ nke a. Maka echiche, lelee vidiyo YouTube n'okpuru (ma gụọ n'okpuru).
Na robot na avatar
Ugbu a usoro a bụ ihe atụ nke ụdị robot nke anyị nwere ike ịtụ anya na ọha mmadụ n'obere oge. N'ikpeazụ, anyị kwesịrị iche echiche banyere ihe nkiri ahụ Transcendence gosiri na usoro ndu ihe omumu nile nwere ike megharia site na nanotechnology. Ndị ọkà mmụta sayensị nke Israel amaliteworị ịmịpụta ihe ngwa ngwa n'afọ a nwere ike bipụta mkpụrụ ndụ nke ahụ na-adabere na ihe ọmụma nke sistem n'ime, dịka ọmụmaatụ, obi (lee vidio dị n'okpuru ebe a). Otú ọ dị, a na-atụ anya na sayensị ruru oge mgbe a na-eji ihe ntanetị nwere ike dochie anya ihe ndị dị na ahụ nwere ike iji dozie njehie ọ bụla. Ị na-achọpụta na ọ bụghị ihe a na-apụghị ime eme? Chee echiche banyere ihe ga - eme ma ọ bụrụ na ị nwere ọnya na otu anụ ahụ nwere ugbu a na - agwọ ọrịa. (Gụkwuo n'okpuru vidiyo)
Iwu inye onyinye na Netherlands na-achọpụtarịrị na akụkụ ahụ nwere n'ezie (n'ụzọ iwu kwadoro) ghọọ ihe onwunwe. Nkà na ụzụ ndị na-ebipụta n'Ijipt na-egosi na iwu ahụ bụ nnọọ ihe efu; n'ihi na na mba dị ka Netherlands na ngalaba ndụmọdụ nke a na-akpọ 'nzukọ ndị nlekọta ahụike' ị nwere ike iche na ndị mmadụ maara na nkà na ụzụ a na-abịa nakwa na ọ ga-adị mma iji bipụta akụkụ ahụ n'ọdịnihu. Ndị ahụ agaghị ajụ akụkụ ndị a dị na ya, n'ihi ya, a ghaghi iloda ọgwụ ọ bụla iji gbochie mmeghachi omume nke ahụ a. E kwuwerị, ha na-ebipụta akwụkwọ ndị dabeere na DNA nke ha.
N'ọnọdụ ọ bụla, ọ bụ ihe na-adọrọ mmasị ịchọta na ahụ na-achọ ịghaghachi ihe ọkpụkpụ mba ọzọ. Ọ na-amasịkwa ịhụ otú ndị mmadụ, dịka ọmụmaatụ, na-enweta obi ha nyere, mgbe ụfọdụ na-ewere ọnọdụ nke onye nyere onyinye, ma nke ahụ.
Iwu inye onyinye na-eme ka obodo ahụ nwee akụkụ gị nakwa na ihe niile bụ ihe onwunwe nke ala, steeti nwere ike (na iwu) na-arụ ọrụ na-akwadoghị. Ọ na-eme nke ahụ na ụlọ ya, ya na akụrụngwa ya na n'ọdịnihu nwere ike inwe ihe ọhụrụ ndị ahụ: akụkụ gị. Enwere ike ime nke a site na netwọk 5G na usoro nhazi igwe ojii nke a na-akpọ CRISPR-CAS12 (lee ihe ngosi TED n'okpuru ma gụọ ya n'okpuru).
Ọ bụrụ na ị dị nkenke ghọtara n'elu, ị nwere ike ịchọpụta na ahụ mmadụ (na usoro ndu ọ bụla) aghọwo biosystem dị iche iche na nso nso, akụkụ nke ọ bụla ga-aghọ ihe eji agbanwe agbanwe ma nwee ike ịgbanwe.
A chọrọ nkwalite a iji nye gị nghọta ka mma maka otu ndị isi ụlọ ọrụ ndị isi na-eche na ihe ha na-eme. Dịka ọmụmaatụ, onyeisi ndị ọrụ nchịkwa Google, onye na-emepụta ihe na onye ọkà ihe ọmụma bụ Ray Kurzweil na-ekwu na na 2045 anyị ga-anwụ anwụ ma nwee ike ibi ndụ n'ime ụwa ndị dị mfe nke na-adịgide adịgide na anyị aghọtaghị na ọ bụ nko. Ọ na-ekwukwa na anyị nwere ike ịnweta avatars ntanetị na avatars dijitalụ ma bulie onwe anyị na ndị avatars.
Kedu ihe bụ "mmuo" ma ọ bụ "mkpụrụ obi"?
Ajụjụ buru ibu bụ: Ònye ma ọ bụ ihe bulitere onwe ya na ndị avatars? Dị ka ndị transhumanists dị ka Ray Kurzweil, ịmara bụ ihe dị iche iche n'ihi ọnụ ọgụgụ ụbụrụ na ụbụrụ. Ọ bụrụ na ị ga-ewu robot na ndị nkwụnye ntinye ntaneti (neurons) ndị dị ọtụtụ dịka ndị nọ n'ụbụrụ mmadụ, mmụma ga-etolite. Ebe ọ bụ na nkà na ụzụ adịghị njikere iji dochie ụbụrụ mmadụ, ụlọ ọrụ ndị dịka Google na-arụ ọrụ na ngwọta ígwé ojii. Ị nwere ike ịsị na ịntanetị bụ ngwá ọrụ dị ukwuu iji jikọọ ọtụtụ kọmputa na onye ọ bụla ọzọ n'ụzọ dị otú ahụ na ha nwere ike ịmepụta ụbụrụ dị mma. Teknụzụ Blockchain nwere ike ịbụ ngwá ọrụ bara uru na nke a. Tụkwasị na nke ahụ, ọ bụrụ na ị nwekwara kọmputa dị iche iche na netwọk, ọ ga-eme nke ọma. Ndị isi ụlọ ọrụ ntanetị bụ ndị na-arụsi ọrụ ike na-arụ ọrụ netwọk na ntanetị na aha n'onwe ya bụ ihe akaebe nke ihe mgbaru ọsọ njedebe bụ.
Ma achọrọ m ịlaghachi azụ ma nọrọ na isiokwu nke 'ịma'. Echiche bụ na ndị mmadụ maara n'ihi na ha nwere neo-cortex (ọ bụ ya mere ndị ọzọ na-adịghị adị, dị ka Ray Kurzweil na-arụ ụka) dị iche na ọtụtụ anụmanụ ndị ọzọ? Ma obu bu ihe omuma nke nwere ihe di iche iche?
Maka echiche a, ka anyị chee na ị nwere ike bulite "mmata" gị gburugburu 2045 gaa na ụwa dijitalụ; nkoghari nke na-aga n'elu ikpo okwu igwe ojii nke Google maka eziokwu doro anya, dika ima atu. Chee echiche na nkwekọrịta nke ụlọ ọrụ Nelonink nke Elon Musk ga-enwe ike ikpuchi ụbụrụ anyị na netwọk. Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike ịme ka ụdị ihe niile dị n'ụbụrụ nke 'ahụ anyị dị ugbu a' dị ka aka, ísì, ịnụ, ịhụ na mmetụta (aka, ike ndọ, wdg). Ọ bụrụ na Google na-emepụta simụm ụwa ọhụrụ, anyị nwere ike ịgagharị na ụwa dịka Jake Sully mere na mbara igwe Avatar nke 2009 nkiri.
Onye na-agba chaa chaa nke ihe nkiri ahụ dị n'okpuru bụ ma eleghị anya ihe nkowa dị mfe iji kọwaa ebe m chọrọ ịga na ntụgharị uche m. Lelee anya ma hụ otú e si enwekarị akara n'etiti onye 'mbụ' na 'avatar'. Otú ọ dị, ihe nkiri ahụ bụ Surrogates dabeere na 'robots' ma ọ bụ 'avatars' dị ka anyị na-ahụ na usoro dịka 'Real Humans' na Netflix. Otú ọ dị, ọ bụrụ na anyị ewere nkwekọrịta ọ bụla nke na-agba ọsọ n'elu igwe ojii, ebe ọbụna avatar bụ dijitalụ, mgbe ahụ, ntụgharị ahụ bụ 'n'èzí ụwa a na-ahụ anya'. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike mgbe ahụ, dina n'elu ihe ndina gị site na interface ụbụrụ na ụbụrụ na onye gị na ya na-edina n'elu bed na-esote gị enweghị ike ichetụ n'echiche ọ bụla ị na-eme n'oge ahụ. Ikekwe ahụ gị na-awụ akpata oyi n'ihi na ụbụrụ gị nọ ugbu a na agha siri ike na ụmụ nwoke na-acha anụnụ anụnụ na-emegharị ahụ. (Gụkwuo n'okpuru vidiyo).
Ọ bụrụ na, dịka ndị ọkà mmụta sayensị dị dịka Ray Kurzweil na Google na ọtụtụ ndị ọzọ transhumanist, ọ ga-ekwe omume ibi ndụ dị otú ahụ na-adị ndụ n'oge na-adịghị anya, ọ bụ na anyị agaghị ajụ onwe anyị ma ọ bụrụ na anyị anọghị na nkogharị dị otú ahụ? Ọ bụghị ndị niile nọ n'ụdị ụlọ ma kpọọ egwuregwu ụwa? Ọ bụrụ na anyị ejiri aka na-eche echiche ahụ ruo nwa oge, mgbe ahụ anyị ga-abịaghachi n'echiche nke "ịmara." Chee echiche Neuralink n'ọdịnihu site n'aka Elon Musk bụ ikuku na-agba ọsọ site na netwọk 5G. Ị nwere njikọ ikuku site na ụbụrụ gị na avatar gị n'emegharị ahụ n'elu ikpo okwu igwe ojii nke Google. Ya mere, onye na-achịkwa avatar na ntụgharị ahụ bụ ụbụrụ mbụ gị nke nọ n'anụ ahụ gị n'ụwa a; onye ị na-ahụ mgbe ị na-ele anya na enyo. A na-achịzi avatar na nmeghari ahụ na ụbụrụ mbụ gị. The avatar bụ 'sitere n'ike mmụọ nsọ' na a pụrụ ịtụle ya n'ime ntụgharị ahụ dịka onye sitere n'ike mmụọ nsọ na 'ncha'. Mmetụta ahụ bụ akara ikuku na ụbụrụ mbụ gị.
Ọ bụrụ na ị nwere ike ịgbaso ihe a dị n'elu, ana m agwa gị ka ị ṅa ntị nke ọma na mmega ahụ na-esonụ. Ugbu a, ị nwere ike iche echiche ọ dị ka ibi ndụ na ntinye ọnụ na otú ị ga - esi na-achịkwa avatar ahụ na nchịkọta nke onwe gị nakwa na anyị nwere ike ile njikọ ụbụrụ ikuku site na netwọk 5G site na ntụgharị dị ka n'ike mmụọ nsọ nke avatar na nyocha ahụ.
Mgbe ahụ, anyị na-abata ajụjụ a ma ị nwere ike iche na ahụ gị ugbu a nwere ụbụrụ nwere ike ịbụrịrị avatar na ngwegharị. Ọ bụrụ na anyị lelee nyocha abụọ nke physicist Niels Bohr, ọ na-egosi na enwere okwu naanị mgbe onye na-ekiri ihe dị. N'ọtụtụ isiokwu m kọwapụtara na anyị "adịla ndụ". Ị na-eme mmalite dị mma ma ọ bụrụ na ị isiokwu a gụchaa nke ọma, lee anya n'okpuru ihe omume 'simulation' ma ọ bụ tinye okwu a 'nkedo' na nchọta ọchụchọ. Ana m ahapụ okwu a n'ebe a ma mechie echiche ahụ n'echiche bụ na anyị "na-ebi ndụ na nmegharị". M na-ama ụma tinye nke ahụ n'amaokwu, n'ihi na ịnweghị ike ibi ndụ, ma enwere ike inwe nkwenye zuru oke na ị bi na ya, ma n'eziokwu ịghọta ma kpọọ egwu (site n'èzí).
Ọ bụrụ na anyị na-egwu egwu, mgbe ahụ, ị ​​ghaghị inwe 'njikọ mkpụrụ obi' na ihe mbụ ahụ ebe, dị ka a ghaghị inwe njikọ Neuralink na 5G na ntanetị igwe ojii nke igwe ojii ma ọ bụrụ na ị ga-esonye na nkwekọrịta nke yiri ka ọ bụ na 2045 . Na 'nkpuru obi' bu ya na onye 'onye mbu' onye no n'oche. Nke ahụ ekwesịghị ịbụ nkwụnye n'ime ụbụrụ, dị ka fim ahụ 'The Matrix', ma ọ nwere ike ịbụ njikọ na ikuku. Ihe avatar na nmeghari bu 'ihe di ndu' ma na echekwa ya n'èzí. Enwere ike na-achịkwa avatar na nmegharị a. Ma eleghị anya, nke ahụ nwere echiche ka mma banyere 'mkpụrụ obi' ma ọ bụ 'ịmara'.
Avatars mkpụrụ obi
In isiokwu a Akọwara m na anyị nwere ike ịgba àmà nke usoro nje virus. N'ime ya, m na-akọwa na mmụgharị a bụ iji nwaa nyocha anyị (ụdị 'mbụ' anyị). Onye na-ewu usoro a dị ugbu a dị ka Lucifer. Nke ahụ nwere ike ịbụ nchọpụta dabere na nchọpụta a site na "ụwa Sim", ma ihe niile na-egosi na a ghaghị ịmegharị ọgwụ ahụ n'otu ntụziaka. Ọ bụrụ na ọ bụrụ na ịmepụta simulation, ị ghaghị ịkwanyere 'iwu nke nnwere onwe nnwere onwe', e nwere naanị 1 ụzọ iji kwado ihe ga-esi na egwuregwu pụta.
Iwu nke nnwere onwe ime nhọrọ
Enweghị ikike nnwere onwe, usoro ihe omume abụghị nmegharị, mana ọ bụ n'ezie ụdị ihe nkiri, ihe si na ya pụta bụrịrị ụfọdụ. Otú ọ dị, ihe dị mkpa nke ịmegharị ahụ bụ na ị na-enye ndị egwuregwu ahụ ịma aka ma chọọ ịnwale otú ha si egwu egwuregwu ahụ. Dịka ọmụmaatụ, ị gaghị arụpụta simulate ụgbọ elu iji mee ụgbọelu ụgbọelu ma gbagoo na autopilot, ị na-ewu ya iji nwalee onye ọkwọ ụgbọelu ahụ. Na nkwekọrịta ọkpụkpọ ọtụtụ ị chọrọ ịmụ otú ndị egwuregwu si akpa àgwà na otu ma hụ nhọrọ ndị ha ga-eme n'otu n'otu na otu.
Nanị ụzọ iji kwenye na nsonaazụ, n'emebighị iwu nke nnwere onwe ime nhọrọ, bụ itinye ọtụtụ NPCs (Ndị Na-egwu Playing) dị ka o kwere mee na egwuregwu nke onye na-eme egwuregwu ahụ na-achịkwa. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịme NPC ndị a n'ọkwá dị elu na nkogharị ma soro edemede; akwukwo nke na - eme ka ọ ghara ikwe ka ndi egwuregwu ndi ozo nwee nduzi di iche. Enwere ike ịchọta ihe ederede nke anyị nwere ike ịmata na nmegharị a isiokwu a.
Ka e were ya na onye 1 na-arụpụta simulation anyị ugbu a ma ọ bụ naanị n'ihi na ọ dị mma na e nwere otu ndị na-ewu ụlọ na "akpaala mbụ" ahụ, mgbe ahụ ịnwere ike ịchịkwa nọmba ole na ole NPCs n'ime ngwegharị; NPC ndị na-agbaso edemede ahụ na nkogharị ma gbalịa ịhazi ndị ọzọ egwuregwu na otu ntụziaka (nke ndị na-ewu ụlọ). Otú ọ dị, e nwere ụzọ ọzọ ị ga-esi emetụta edemede ahụ na ihe ga-esi na ya pụta, ma mgbe ahụ anyị ga-ebu ụzọ lelee onye ndị egwuregwu niile na-ajụ ma ọ bụrụ na 'ndị ọ bụla na-enweghị mmasị na mkpụrụ obi na ndị ọrụ mbụ' si; na okwu ndị ọzọ: ndị egwuregwu ole ka ha na-egwu ntụrụndụ a?
Ebee ka nkpuru obi nile si?
Ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ nọ n'ụwa a na-abịaru 8 ijeri. Ọ bụrụ na anyị na-amalite site na ụdị nṅomi ahụ, ọ ga-adị mkpa ka ndị 8 ijeri egwuregwu '' mbụ 'ahụ dị mkpa iji kpọọ egwuregwu a. N'ezie, onye na-agụ akwụkwọ dị oké egwu kwesịrị ịjụ m ajụjụ a: Ebee ka mkpụrụ obi ndị ahụ niile si bịa? Ugbu a ka anyị maara na echiche nke "mkpụrụ obi" ma ọ bụ "ịmara" pụtara n'ezie njikọ na akpaaka mbụ ahụ; ụdị nke mbụ anyị na-anọghị na nmegharị a. Ọ na-eguzo, dị ka a pụrụ isi kwuo ya, maka njikọ njikọta na nnwere onwe mbụ (dika akọwapụtara n'elu). N'ihi ya, ọ ga-abụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị na-egwu 8 na mbụ.
Echere m na ọ dịghị mkpụrụ obi 8 na ọ dịghị mkpụrụ obi na-ekewapụta ngwaọrụ, dịka ndị mmadụ na-asị na ọ bụ Wes Penre (lee ebe a). N'echiche m, ndị ahụ bụ akụkọ efu efu. Ọ bụ nnọọ ihe ezi uche dị na ya ilele ọnọdụ nkà na ụzụ ugbu a. N'ime ya, anyị na-ahụ na ndị na-arụ ọrụ ụgbọ oloko na-esiwanye ike ma na ebumnuche bụ na ọgụgụ isi nwere ike iṅomi ọgụgụ isi na mmetụta nke mmadụ. Ya mere, ọ bụrụ na onye wuru (ma ọ bụ ndị na-ewu ụlọ) nke nmegharị a enwewo ike ịmepụta avatars onwe ya (ahụ mmadụ anyị), ya mere ọ ga-eche na ọtụtụ ozu / avatars anyị na-ahụ gburugburu anyị na-edeghachi onwe ya, ma ọ dịghị nchịkwa dị n'èzí. Ha bụ, dị ka a pụrụ isi kwuo ya, ndị mmadụ nwere ọgụgụ isi ụmụ mmadụ na-enweghị ihe ọhụụ 'Jake Sully' ma bụrụ ndị na-adịghị ahụ anya. Maka maka nkwekọrịta, ka anyị kpọọ nke a NPCs na-enweghị isi. Mkpụrụ obi NPC adịghị enwe nsogbu ma nwee ike inwe ezigbo mmasị na ọmịiko. Nke ahụ bụ n'ihi na anyị na-emeso elu AI (na bio-brain). Ndị na - ewu mgbatị a ejiriwo "bọọlụ" nke ọma.
Ị nwere NPC ndị na-achịkwa ndị na-ewu mgbatị a na ndị NPC ndị na-enweghị isi bụ ndị nwere 'ụbụrụ nwere ọgụgụ isi' ma na-akwado ya iji soro edemede ahụ. Ndị otu NPC bụ ndị isi na-achịkwa "njikọ archontic wireless" na onye wuru (/ ndị na-ewu ụlọ) ma na-achịkwa edemede ahụ. Ndị nke abụọ na-eso edemede ahụ n'enweghị ihe ọ bụla.
Gịnị bụ ọrụ nke mkpụrụ obi (Zombie) NPCs?
Mbụ anyị na-ele anya na mmetụta. Ọ bụrụ na ị na-egwu simulation ma na-agba gị gburugburu na ndị NPC na-enweghị isi na-agbaso edemede ahụ, mgbe ahụ, ị ​​ga-eche echiche banyere 'nrụgide ndị ọgbọ'. Ntughari a dịkwa oke nkpa na ị malitere ịmara ya.
echiche nke 'mkpụrụ obi'
O doro anya na echiche nke 'mkpụrụ obi' na ihe a abụghị ihe ọzọ karịa na ọ dịghị mpụga 'Jake Sully' na bọtịnụ nke onye dị otú ahụ.
Ị na-enwe mkparịta ụka na ndị na-amaghị ihe okwu a bụ "mkpụrụ obi" ma ọ bụ "ịmara" bụ, karịa na ha ewepụtara okwu sitere n'okpukpe ma ọ bụ omume ime mmụọ? Site na oge mmuru m maara "eriri na n'èzí". Anaghị m ewere onwe m onye m na-ahụ mgbe m na-ele anya n'enyo. Ya mere, m maara nke a 'Jake Sully' nke na-eme ka m na-ese mpempe akwụkwọ a. Ọ dị mgbe ahụ. Ndị mmadụ na-enweghị mkpụrụ obi NPCs (ma onye nwere ike inwe ọgụgụ isi ma nwee ọmịiko) anaghị adị ndụ (enweghị Jake Sully na mbụ oyi akwa na mpụga nke nmegharị a) ya mere enweghị ike ichetụ n'echiche a. Mkparịta ụka banyere 'mkpụrụ obi' ma ọ bụ 'ịmara' ga-abụ ụdị 'ikere òkè na omume' ma ọ bụ okwu Robot Sophia; dabere na 'ịchọta okwu'.
Ọrụ nke ndị NPC na-enweghị isi bụ iji kpagbuo avatars dị ụtọ (ma ọ bụ karịa: ndị egwuregwu mbụ na-esonye na ngwepị multi-player site na avatar ha) iji soro edemede. Ha aghaghị inye ndị avatars ahụ sitere n'ike mmụọ nsọ mmetụta na ha dị n'ọtụtụ dị nta nakwa na nkwụsị ahụ abaghị uru. Ha ga-egosiputa ihe na-atọ ụtọ mgbe ị na-esonye ma ọ bụ ihe ọjọọ ọ na-aga mgbe ị na-echegbu onwe gị. Ọ bụ ya mere anyị ji hụ ka ọnụ ọgụgụ ụwa na-eto eto na iri afọ ole na ole gara aga. Ọ bụ ihe kachasị mma nke onye wuru ngwongwo a.
A rutela ebe a ebe ebe ọnụ ọgụgụ ndị NPC nọ na-eto eto, na-enye ndị na-eme ka mmụọ nsọ nwee mmetụta na ha nọ na njedebe dị mkpirikpi. Ọbụna anyị na-achọ ichefu na ọ bụ naanị egwuregwu; ka anyị na-ahụ nkedo.
Ọ bụ ya mere ọ dị mkpa iji weghachite onye anyị bụ na ịtụkwasị obi n'èzí. Ndị NPC niile a na-eme ka anyị kwenye na anyị na-efu ma na anyị nọ na ndị nta. Nke ahụ bụ nrọ nke nkedo. O yiri ka ọtụtụ ijeri na-emegharị ahụ; karia nke a, o nwere ike ịbụ obere aka na-agba mbọ ịgba ọsọ ahụ. Ahụ anyị na-ahụ maka avatar na-arụsi ọrụ ike maka nkedo a. Nke ahụ bụ naanị ụbụrụ nnabata anyị na mmetụta ya. Ihe mgbagha nke okwu nke Babilọn na-enye anyị nsogbu n'ime mgbagha a ma mee ka anyị gbachie nkịtị ma gee onye anyị bụ. Cheta Jake Sully.
Ihe ndekọ njikọ njikọ: patreon.com
Ee e, anyị adịghị ebi na ntinye kọmputa kọmputa 'extraterrestrial': wepụ ihe nzuzu ahụ
Echiche nkwenye nke hacked
Tags: Avatar, mmata, Characters, agba, game, ụmụ mmadụ, Jake, multi, Non, NPC, player, egwu na-akpọ, ezigbo, nyocha, imebi, zielen
8 July 2019 na 14: 56
Ọ bụrụ na ị na-eche ugbu a, "Oh na-eche na m bụ NPC!"
Iji malite, o nwere ike ịbụ na ọ bụghị na ebe nrụọrụ weebụ a, mana ọ ga-ekwekwa omume na afọ ịmepụta ụbụrụ avatar gị mere ka ị chefuo onye ị bụ.
hans coudyser dere, sị:
8 July 2019 na 18: 31
Kpachara anya na-ekwu na eleghi anya ọtụtụ ndị na-ewu mgbatị a gụnyere ... Ma gịnị mere ha ji eme ya?
8 July 2019 na 18: 53
Agaghị m akọ Hans nke ọma.
Nanị m depụtara ihe ndị nwere ike ịme ma kpọọ ya onye ọrụ ahụ; dị ka Ray Kurzweil nwere ike ịmepụta simulation na-esote ya ma mee ka otu ndị na-eme ihe nkiri na-emepụta usoro mmegharị ahụ.
Karịsịa gụọ isiokwu n'okpuru njikọ.
Yuri Goosen dere, sị:
8 July 2019 na 19: 08
Enweelarị m nghọta dị ka obere nwatakịrị, mana mmemme na ịmeghachi ihe mgbe niile na-ebute nje virus!
Mgbe m bụ nwatakịrị, echere m na aghaghị m ịnọ ebe a ma na-eche ma ọ ga-adị ka ịnwụ iji nwee mmetụta nke ahụ n'oge ahụ. Achọghị m ka m nwụọ n'ihi ịghara ịchọrọ ịdị ndụ ma n'ihi ịchọ ịmata ihe!
Ka oge na-aga, ndị mụrụ gị jụrụ gị! "Gịnị ka ị chọrọ ịbụ ná ndụ gị?" M sịrị, "Agaghị m abụ ihe ọ bụla, agaghị m amụ ihe n'ihi na ihe ndị ahụ bụ ihe na-adịghị amasị m" Mgbe ahụ, ndị mụrụ m kwuru, sị: ma ị ghaghị ịghọ onye na-abaghị uru ọzọ!
M kwuru mgbe ahụ m bụ onye m chọrọ ịbụ na m ga-agagharị.
Na mgbe nke a gasịrị enwere m ike gee ntị nke ọma karịa mmetụta m n'ihi na ugbu a, enwere m aka na weebụ nke bullshit!
Ya mere ekele maka isiokwu a! Enweela m njikọ ọzọ na ezigbo onye ahụ!
Danny dere, sị:
8 July 2019 na 21: 22
Kedu ihe ị chere banyere echiche na ndị na-adịghị ndụ nwere ike mmụọ nsọ site n'aka ndị mmụọ nsọ n'oge ndụ ha? Ya mere kwuo ya.
8 July 2019 na 22: 00
Mgbe ahụ ị ghọtahiere. Gụgharịa nke ọma.
Ị nwere ike iwepụ ọzọ avatar mgbe ị na-egwu egwuregwu egwuregwu?
9 July 2019 na 18: 16
Ee e, echela.
Ma ọ bụrụ na avatar ọzọ nwere ụbụrụ i nwere ike ịgafe ya.
Ma ọ bụ nke ahụ agaghị ekwe omume n'ihi na ọ na-eji ụma eme ihe mgbaru ọsọ egwuregwu ahụ?
9 July 2019 na 18: 55
Enwe ọ bụla nwere ụbụrụ ma ị nwere ike ime ọtụtụ ihe kpatara ya ma ọ gaghị eme ka njikọ mkpụrụ obi bilie.
NPC n'egwuregwu Playstation agaghị enweta na mberede onye na bọtịnụ.
guppy dere, sị:
9 July 2019 na 03: 07
Chee na o kwere omume ire mkpụrụ obi gị nye ụlọ ọrụ na-adịghị ndụ. Ọ pụtara na ị belata onwe gị na iri na otu (obere ala) ma hapụ mkpụrụ obi gị. Ị na-ere mkpụrụ obi gị iji bulie onwe gị ụgwọ maka ndị ọzọ site na mmegbu, igbu ma gbasaa ụgha iji chebe ike gị.
N'ihe dịkwuo anya ị si n'ụlọ, ọ ga-esi ike karị ịlaghachi.
Nke a apụtaghị na m dị nsọ, ma na ọ bụ m maka ọrụ m. Anaghị m etinye aka n'okpukpe okpukpe ndị gbara ọchịchịrị. Ọ bụrụ na ị maara nke mbụ gị, ịchọrọ ijide njikọ a ma ghara imelite ya na ọkwa dị ala. Maka na anyị aghọtala ugbu a na anyị emeela nke a ma na-echekarị n'ebe obibi anyị na mbara ala a.
Ihe ị na-ede n'isiokwu a bụ ihe niile gbasara, ebe ọ bụ na ọ bụ ihe niile gbasara gị na nzaghachi anyị na ya.
9 July 2019 na 12: 55
Ihe dị mma, ihe dị arọ. Eleghi anya ọ bụghị maka ndị nkịtị, ha adịghị eme ngwanrọ maka nke ahụ.
Ajụjụ ahụ ka dịịrị onye kere ike, amaghị ihe, na ihe ọ na-enweta na ya. Ma eleghị anya, Lucifer, bụ onye 'na-eweta ìhè,' ma ọ bụ ndị ọrụ ahụ si na edemede ahụ nke ọ na-akwụghachi ụgwọ ya, ?
Kedu ihe Lucifer meriri nke a? Ọ na-enwe obi ụtọ na-efu anyị, nnukwu ihe nkiri maka ya? Ndi Lucifer ma obu Chineke ??
9 July 2019 na 14: 55
Na-aguta ihe gbasara isiokwu a banyere cell stem ebe a:
Lucifer bụ onye na-ewu usoro nje ahụ (ihe ngbagharị) nke anyị na-egwu. N'isiokwu ahụ, m na-akọwa na ọ dị ka ebumnuche bụ ịbabiga ókè n'ọtụtụ ("mkpịsị ụkwụ").
Ọ bụ ya mere chi nke okpukpe ọ bụla ji nọrọ na nzuzo Lucifer ma na-efe ofufe n'ihu ọha (ọ bụrụ na ịchọta na YouTube) site na Chọọchị Katọlik:
9 July 2019 na 15: 19
Na (site na) anya m na ọ bụkwa nhazi na owuwe ihe ubi ((imeghari) nke ume iji nọgide na-enwe usoro nhazi nke a. Hụ ntụziaka dị iche iche dị na Bible, na-ekewa igbogbo ọka na ọka / ewu na ewu, wdg.
Ị kụrụ ihe ị ga-aghọrọ, nzaghachi usoro nke ether.
9 July 2019 na 15: 25
O kwesiri iburu n'uche na okpukpe na dualsime (chi / satan di iche iche na ihe ndi ozo di iche iche, dika ndi Kristian na ndi Islam, nke di n'aka nri, ime na yang, wdg) bu akuku nke akwukwo Lucifer iji me ka ihe ndi ndu DC njedebe mgbede.
Ihe mgbaru ọsọ kasịnụ bụ maka mkpụrụ obi na-akpọ mkpụrụ obi (yabụ nke mbụ gị - ụdị njirimara nke na-eme ka mkpụrụ ndụ na-emepụta ihe / njirimara àgwà) iji na-eje ozi nje virus iji nwee ike ibute ọnyá ma weghachite oghere cell / quantum.
Ọ bụ ya mere o ji dị mkpa ịjụ ma jụ okpukpe abụọ na ụzọ dịgasị iche iche na-aga n'ihu n'ịdị n'otu (nke bụ otu na otu nkwa nke 'ndụ ebighị ebi' si n'okpukpe) na ichetara gị na ị na-eme ka simulation (nje).
9 July 2019 na 15: 34
arụ ọrụ siri ike na-eme na mkpọchi na ọnụ ụzọ nke ihe ngosi.
9 July 2019 na 17: 56
Patricia van Oosten dere, sị:
14 July 2019 na 16: 41
Nnyocha dị ukwuu; ekele m nke ukwuu. Mụ onwe m kwa bụ onye maara site n'ụbọchị ahụ na e nwere ọtụtụ zombies na 'egwuregwu' ahụ. Ihe ole na ole na-abụghị'zombies 'mere m ebe a, ma ọ bụrụ na m gaara agaghachi' na-enweghị nghọta zuru ezu na ihe na-eme. Ị nwere ike ịnọ na-echegbu onwe gị mgbe nile na ihe kpatara ya ji bụrụ na mmadụ, dịka ọmụmaatụ, adịghị aghọta na ihu igwe na-edozi ma ị nwere ike. Ma ọ bụ ihe kpatara ya, ọ bụrụ na i chere na ị kwadoro na klas n'oge ezumike nke onye nkụzi ga-eche ihu, ìgwè a dum ga-ada ada mgbe ị na-ewere nke ahụ dị ka dike. Azịza ya bụ nke mbụ nwere nkwado ndabere, ihe ederede na ihe bụ 'mbụ', zombie adịghị. Nkọwa ya bụ ihe ọ mụtara, weghaara ya, kwụ ya, gbanye, ihe ọ bụla. O nwekwaghị. Dị ka onye nkụzi na-abụ abụ, na 30 afọ nke ahụmahụ n'ịkụzi ihe, Amaara m na ọ dị mgbe mmadụ ole na ole nwere ike ịkpọtụrụ ndị dị ọcha. Ihe ka n'ọnụ ọgụgụ apụghị ime nke ahụ; nwere ike 'iṅomi' na nke ahụ anaghị arụ ọrụ nke ọma na abụ (na-enweghị ezigbo ọrụ nkwụsị dị ka PA na igwe okwu). Ndị na-egwu egwu nke ọma na-eme onwe ha ka ha bụrụ ngwá ọrụ dị mma, na-enweghị ike inweta ma mepụta n'oge ahụ; ma ọ dị mma ka mụọ nwa. Mpempe akwụkwọ nkerisi dị nkpa, ma n'ụzọ doro anya. Nguzogide ime nnyocha n'ime ọdịdị gị, ihe mbụ gị bụ ihe ịrịba ama nke 'ala zombie'. Na n'ezie, enwebeghị m ike gbanwee onye ọbụ abụ site na zombie na mbụ. Ọ dịghị mgbe ọ bụla. Ọtụtụ n'ime ha chere na ọ bụ m; n'ihi na naanị m na-ezo aka na rediscovery na mbido ala na nkwekọrịta mbụ. Ewezuga ihe omumu m; nke ahụ na-adọrọ mmasị maka copier. Ị nwere ike mgbe niile ịfụgharị 'izu ike'. Ọ na - akpata nhụjuanya dị ukwuu iji ghọta nyocha ndị a ị kọwaara ebe a, ọ bụkwa ya mere o ji dị oke mkpa na ọla edo. Mana ọ na-agbakwa gị ume ka ị bụrụ ihe mbụ megide nrụgide na ịghara itinye aka na nje ọ bụla; na, dịka ọmụmaatụ, enweghị ike ịgba ọgwụ. N'afọ 57 m, ọ dịtụbeghị mgbe m jikọtara ya na ya ma nwee ike ikwu na ana m elekọta m nke ọma site na 'mbụ'. Nanị ihe mgbaru ọsọ m n'oge a, tupu m esi na ya pụọ ​​ọzọ, ọ ga-aghọta ya niile ma gwazie egwuregwu a na udo. Ụmụ m, ndị nwekwara otu ụdị ọbara dị ka m na-eme, nakwa na ụdị ọbara ahụ na-apụta mgbe nile ịmepụta 'ndị mbụ', nke ahụ bụ ajụjụ m na-esonụ, m mụtara igwu egwuregwu ahụ nke ọma, iji nwee obi ụtọ (dị ka onye ịgba egwú, dịka ọmụmaatụ) na-ata ahụhụ site na zombies na mmetụta uche ha na-agba mbọ na ịmanye gị ụgwọ. Na-arụ ọrụ nke ọma. Ekele!
14 July 2019 na 18: 25
Ekele m Patricia
Dịka ọ dị na nkuzi abụ gị, isiokwu a na-abịakwute onye ahụ na-enweghị mkpụrụ obi, n'ihi na maka ndị ọzọ, ọ bụ akụkọ na-adọrọ mmasị nke na-adịghị akpali ihe ọ bụla. Ọ bụ ya mere ị ga-eji nweta ọlaedo.
Ndị ọkà mmụta nkà na ndị na-egwu egwú bụ ebe ndị magburu onwe ha iji nyefee foto ndị dị elu na ịkwado ndị na-adịghị anụ ọkụ n'obi n'etiti ndị na-ede foto. Ekele dịrị gị maka ịkekọrịta ahụmahụ gị bara uru n'ọmụmụ abụ.
Azịza nile sitere na njikọ ikuku gị na mbụ gị. Ọ bụ ya mere na abụ 'ọgba aghara nke Babilọn' m na-ekwu na anyị ga-agba nkịtị ma gee onye ị bụ ọzọ.
" Ọ bụ Ursula von der Leyen (onye isi oche EU n'ọdịnihu) bụ otu ụdị ọbara ahụ dịka ezinụlọ ndị eze Britain?
Ọ bụ Deutsche Bank ka e bu ụzọ zọpụta mbụ? »
Nleta nile: 15.836.866